Isaziso sokuvalwa kwexesha elide kwe-Ota Ward Hall Aplico kunye nokuphinda kuqaliswe ukusetyenziswa kwesicelo emva kokuvalwa
Isaziso sokuvalwa kwexesha elide kwe-Ota Ward Hall Aplico kunye nokuqaliswa kwesicelo sokusetyenziswa kwendawo emva kokuvalwa.
E-Ota Ward Hall Aplico, ukuze kuqinisekiswe ukhuseleko lwabo bonke abasebenzisi bangoku, senza umsebenzi wokuhlaziya i-seismic retrofitting kunye nokulungiswa kweesilingi zeeholo ezinkulu, iiholo ezincinci kunye neholo enkulu yeholo, kunye namagumbi omboniso.
Izicelo zokusetyenziswa kweholo enkulu ukususela ngoMatshi 2023 (Reiwa 5) emva kokuba imyuziyam ivaliwe ziya kuqaliswa kwakhona ngolu luhlu lulandelayo.
Nceda uqaphele ukuba akunakwenzeka ukusebenzisa le nkonzo ngoMatshi 2023 ngenxa yokuhlehliswa okungenakuthintelwa komsebenzi wokwakha.
Enkosi ngokuqonda kunye nentsebenziswano.Amatikiti asafumaneka ngexesha lokuvala.
Ixesha lokuvalwa okucwangcisiweyo
NgoJanuwari 2022 ukuya kuFebruwari 1 (kucwangcisiwe)
Ixesha elikhoyo kunye nexesha lokuvala
Inkonzo icwangciselwe ukuqala ngoMatshi 2023 emva kokuba kugqityiwe ukwakhiwa.
Malunga nexesha lokuphinda uqalise ukusebenzisa usetyenziso
Isicelo sokusetyenziswa kwesibonelelo ngo-Matshi 2023 (Reiwa 5) emva kokuvalwa kwemyuziyam siya kuqalwa kwakhona kule shedyuli ilandelayo.
Ulwazi lwamva nje luya kuthunyelwa kwiwebhusayithi yethu nanini na.
Ixesha lokufaka isicelo kwakhona
iholo enkulu Ukusukela ngoLwesibini, nge-2022 kaFebruwari 4 (Reiwa 2) (Qaphela) Nceda uqaphele ukuba akunakwenzeka ukusebenzisa le nkonzo ngoMatshi 2023 ngenxa yokuhlehliswa okungenakuthintelwa komsebenzi wokwakha.
Iholo encinci / igumbi lomboniso Ukususela ngoMvulo, nge-2022 ka-Agasti 4 (Reiwa 8)
Isitudiyo A / B. Ukusukela ngoLwesibini, nge-2022 kaFebruwari 4 (Reiwa 11)
Malunga neofisi ngeli xesha livaliweyo
Siza kuthengisa amatikiti emidlalo kunye nokwamkela irente emva kokuba ivaliwe imyuziyam.
Iiyure zokuvula 9: 00-17: 00
Iintsuku ezivaliweyo Ukuphela konyaka kunye neeholide zoNyaka oMtsha (12 / 29-1 / 3), ukugcinwa kunye nokuhlolwa
I-37-3-XNUMX Kamata, Ota-ku, eTokyo
Malunga ne-10,991㎡ (indawo iyonke)
Ulwakhiwo lwe-SRC Inxalenye yesakhiwo S
Imigangatho emi-5 ngaphezu komhlaba, imigangatho e-1 ngaphantsi komhlaba
Iholo elikhulu (izihlalo ezili-1,477)
Iholo encinci (izihlalo ezili-175)
Igumbi lokubonisa (malunga nezihlalo ezingama-400)
Isitudiyo se-AB, igumbi lokunxiba
ICandelo loNxibelelwano loKwakha kunye noLungelelaniso oyiNtloko uTakashi Kamoshida
Oyintloko oyintloko uSatomi Koike